Robert Burns. Makore makumi maviri nemaviri nemaviri asina nyanduri ane mukurumbira weScotland. 222 poems | Zvazvino Zvinyorwa
Nhasi kune zvakare chimwe chiitiko chakakosha, icho che rufu, Makore makumi maviri nemaviri apfuura nhasi, kubva mudetembi ane mukurumbira weScotland, Robert Burns. Chokwadi isu tese takambonzwa (uye kuyedza kuimba) rwiyo rwepasirese narwo vanhu veSaxon vanoonekana navo gore, ravo Auld Lang Syne. Asi pane zvisingaverengeke nhetembo nenziyo. Ini ndinoongorora zvishoma hupenyu hwake uye zvimwe zvacho kurangarira iyi huru yenhetembo.
2 Nhetembo nenziyo
Robert Burns akaberekerwa mu Scotland muna 1759 uye akararama chete 37 makore. Asi kunyangwe hazvo huripo kwenguva pfupi, yakasiya nhaka hombe yenhetembo nenziyo dzave, uye dzichiri kuchengeta, simba rekushamisika, kufadza nekufambisa kusvika panhongonya. Iye ndiye anonyanya kuzivikanwa uye ane mukurumbira mudetembi weScotland.
Mhuri ye varimi vanozvininipisaAive wedangwe pavanin'ina vanomwe, uye baba vake vaida kuti pamusoro pekushanda muminda, vana vavo vakadzidza uye vakadzidza kuverenga nekunyora. With 27 makore Robert akawana mukurumbira nekuburitsa yako yekutanga kuunganidza nhetembo, Nhetembo Zvikurukuru muScotland Dialect, iyo yakakanganisa vakadzidza veElinburgh.
Aive yakasimba scottish uye aigara achichengetedza rudo rwake kune kwake kwevarombo. Mabasa ake aiwanzo gadzirisa matambudziko aibata makirasi epasi uye aida kusimbisa kuenzana munharaunda.
Ivo vanowanzo kuverengerwa muzvikamu zvikuru zvitatu: huzivi, kudanana uye kuseka, asi ivo zvakare vakasanganiswa mune inopfuura nhetembo imwe. Pakati pavo pane: Rudo uye rusununguko, Tam O'Shanter, Highland Mary, Iyo Imbwa Mbiri, Tsitsi Ine Rudo, Kuna Maria Kudenga o Kuuya kuburikidza ne rye.
Hushamwari hwekare hunofanira kukanganwika
Kwemazuva akanaka ekare, shamwari yangu ...
Moyo wangu unosuwa, nemisodzi pamisodzi yangu;
mufaro wanga usinganzwisisike kwandiri kwenguva refu, yakareba:
ndakanganikwa uye ndisina shamwari ndinotsungirira chiuru chemakomo,
pasina izwi rinotapira rairira munzeve dzangu.
Kukuda ndiko kunakidzwa kwangu, uye kunorwadza zvakanyanya runako rwako;
kukuda ndiko kusuwa kwangu, uye kusuwa uku kwaratidza;
asi moyo wakakuvara uyo wave kubuda ropa muchipfuva changu
inonzwa kunge kuyerera kusinganeti kunozokurumidza kugadziriswa.
o, dai nda - dai ndaigona kubata mufaro, ndaigona--
zasi murukova ruduku, munhare yakaneta yakasvibira;
nekuti ndipo paanodzungaira pakati pekusingaperi nziyo
misodzi yakaoma iyo kubva pameso ako.
Ruva dzvuku, dzvuku
Ah rudo rwangu rwakaita seruva dzvuku
iyo inotumbuka munaJune.
Rudo rwangu rwakafanana nerwiyo
Saka ndimi mudiwa wangu anodikanwa
rudo rwangu rwakadzika kwazvo
kuti ndicharamba ndichikudai
Kusvikira makungwa aoma
Kusvikira makungwa apera mudiwa wangu
uye mabwe anonyungudika nezuva
Ndicharamba ndichikuda, mudiwa wangu,
chero bedzi hupenyu huri kuramba huripo.
Uye ini ndinokuonekana iwe, wangu wega rudo,
Ndinoonekana newe kwechinguva
asi ndichadzoka, mudiwa
kunyangwe iri zviuru zvemamaira kure
Ah! Uri kuenda kupi, chinokambaira?
Ungatsunga sei kuisa gumbo rako seizvi
nezve mukadzi akanaka kudaro!
Enda unotsvaga kudya kwako kwemanheru kumwe kunhu
pane mumwe muviri wakashata.
Enda kune yakasindimara bum tembere.
Ikoko iwe unogona kukambaira, kunyepa, uye kumonera
Nevamwe varume, kurwisa mombe,
uko kusina nyanga kana muzinga wemabhonzo
kuminda yawo mikobvu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Robert Burns. Makore makumi maviri nemaviri nemaviri asina nyanduri ane mukurumbira weScotland 222 nhetembo